ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းရင်းဆယ်ခု - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ငါမနက်တိုင်းနှင့်ညတိုင်းဤအရာများကိုဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်မကြာခဏပြုပြင်ပြောင်းလဲသည်။ သင်ကြိုက်သလိုငှားယူပါ၊ ဤအရာအချို့သည်ငါ့ကိုအအေးမိစေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကစိတျဝငျစားဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်ကိုငါသိ၏။ သင်၏အကြောင်းပြချက်ကိုရှာဖွေပြီးသင်ဤပြthisနာကိုအဘယ်ကြောင့်အတိအကျကြုံနေရသည်ကိုမကြာခဏသင်ကိုယ်တိုင်သတိပေးပါ။
porn ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ porn အသုံးပွုသောအခါငါကပို porn ကိုကြည့်ဖို့မလှူခံစားရတယ်။ ငါသည်ငါ့အချိန်, ငါ့စွမ်းအင်, ငါ့ဘဝတစ် fuck ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ pixels ကို၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ချင်ကြဘူး။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင် fuck ဆိုတဲ့လက်သို့ချွတ်လူရှုပ်ဖို့မဖြစ်မနေခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး! ဤသူကားငါ၏အသက်ပေတည်း, ငါပြန်ချင်တယ်။
porn ညစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်လိုသာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာညစ်ဖန်ဆင်းခြင်း, လိင်တ္ထုမှလူသားတွေ၏ objectification နှင့်ပျက်စီးခြင်း၏ထိုက်သောအပြစ်ရှိ၏ display ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြောင်း, ငါကတကယ်တော့ဆွဲဆောင်ပါတယ်ကြောင်းအစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေမျှဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည်, ငါ့ကိုလူတစေသည်အရာကိုတစ်ညစ်ပကျြစီးခွငျးဖွစျသညျ။ စောင့်ကြည့်မိန်းကလေးငယ်နှိပ်စက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်, အပေါ် jizzed hit, ဆို့, etc, ဒါမှမဟုတ်မိန်းကလေးသူတို့ကိုယ်သူတို့ခံစားရန်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အတွက် porn, ငါကတခြားလူသားတွေ၏ဆငျးရဲခွငျးကိုချွတ် jerking လိမ့်မယ်။ ဝေးနေတဲ့ကွန်ပျူတာမော်နီတာနောက်ကွယ်မှမိုင်တစ်ဦးပြည့်စုံလူစိမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးအဘို့တယောက်၏ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ် objectifying ပျော်မွေ့ဖို့စွမ်းရည်မှပျော်မွေ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခုခုမဟုတျပါဘူး, ကသနားခံစားရဖို့တစ်ခုခုပါပဲ။
porn ငါ့ကိုအကြောင်း shit မပေးပါဘူးကြောင့်မိန်းမတို့အားငါ့ကို ရှိ. ကျေးဇူးစေသည်။ သူတို့ပျော်မွေ့နှင့်အတူ writhing နေကြတယ်နဲ့တူ porn အတွက်အမျိုးသမီးတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုသူတို့ငါ့ကိုခစျြနဲ့တူပါကကြည့်ရှုစေပေမယ့်သူတို့ကိုငါတစ်ခုခုကိုဆိုလိုတာနဲ့တူ, အဖြစ်မှန်သူတို့သညျငါ့ကိုအကြောင်းကိုနှစ်ခု Shit မပေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဖြစ်နိုင်ငါ့ကိုသူတို့ချွတ်လူရှုပ်သောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားဝက်ကိုမုန်းလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုမှချွတ်လူရှုပ်ကြောင်းဝက်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာ။ သူတို့သည်ငါ၏ပန်းတိုင်များ, ငါ့ရူပါရုံ, ငါ၏ကိလေသာ, ငါ၏ဘဝအကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး, သူတို့သညျငါ့ကိုကျွန်ဖြစ်ရန်နှင့်ပြန်လာ၌ငါ့ကိုအလျှင်းမပေးစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ တစ်ညစ်, ဒစ်-jerking ဝက်မဟုတျဘဲငါ့ပတ်လည်တစ် shit မပေးပါဘူးကြောင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင် fuck ဆိုတဲ့လက်သို့ချွတ်လူရှုပ်ချင်ကြဘူး, ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်မိန်းမတို့အားတန်ဖိုးသည်လူကိုဖြစ်ချင်တယ် ။
porn ငါခံစားချက်အလေးပေးသည့်အခါ porn မှဖွင့်ဖို့လေ့အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်ပိုင်း Euphoria ပီတိ၏အဓိပ္ပာယ်ဖန်တီးသောအရာတစ်ခုခု, ကိုမကျေနပ်သည်မကျေမနပ်, ပင်ပန်း, etc ဒါပေမယ့် Self-medicating ညစ်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူရှိချင်ကြဘူး။ ငါတရားထိုင်, အနုပညာ, ဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့တစ်ဦးဝိုင်းတော်သားတို့ကဲ့သို့, စိတ်ရှည်, တန်ဖိုးရှိရှိလမ်း၌ငါ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သင်ယူဖို့ချင်တယ်။
porn အမှန်တကယ်ငါ့ကိုလျော့နည်းစိတ်ခံစားမှုတည်ငြိမ်စေသည်။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူတချို့အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ပံတောင်းကြေးနီတူးဖော်ရေးအယူအဆမှပူးတွဲပါရအောင်, သဘာဝလိင် drive ကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းညှိတဲ့လူတစ်ယောက်လျော့နည်းနိုင်စွမ်းငါ့ကိုအောင်, ငါ့ကိုစသည်တို့ကိုစိတ်ပျက်, စိတ်မရှည်ခြင်း, ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါကျန်းမာနည်းလမ်းတွေထဲမှာစိတ်ခံစားမှုကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံလေ့လာသင်ယူရန်လိုကြသည်။
porn အသက်တာ၏ပျော်ရွှင်မှုမှငါ့ကို numbs ။ (စိတ်ပျက်, ငြူစူသောစိတ်, ဝမ်းနည်းမှု, အထီးကျန်ဆန်, ပျင်းလိုမျိုး) မှာ "မလိုလားအပ်သော" စိတ်ခံစားမှုထုံဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှာ, အမှန်တကယ် shit ခံစားရရန်စွမ်းရည် numbs ။ ငါပင်သေဆုံးချစ်ရသူနှင့် ပတ်သက်. ဝမ်းနည်းဖွယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မခံစားရဘူးရှိရာအချက်ရန်။ အဲဒီ Shit တက် fucked နှင့်ငါကမလိုချင်ကြဘူး။
porn လူတွေ, အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများကိုဆက်စပ်ငါ့နိုင်စွမ်း degrades ။ ငါ porn ကိုကြည့်တာတဲ့အခါမှာသဘာဝဗီဇအတိုင်း, လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံဖို့လူနားလည်ရန်နှင့်ချဉ်းကပ်ရန်, ဖြည့်ဆည်း, နှင့်အမျိုးသမီးဆွဲဆောင်ရှုံးသည်။ ဒါဟာခွေးပို, ငါ့ကိုပိုပြီးလူမှုရေးအရကြောက်စေသည်။ ရဲ့နောက်တဖန်ဆိုပါစို့: ညစ်ညမ်းနေတဲ့ခွေးငါ့ကိုပိုပြီးစေသည်။ ရဲရင့်, Self-စိတ်ချပါ, ယုံကြည်မှု, အပူအပင်ကင်းပြီး, unapologetic-သမီး, ကျက်သရေနှင့်ဘောလုံးအားလုံးငါ porn မှချွတ်လူရှုပ်သောအခါအကြှနျုပျကိုဂရုစိုက်မမိန်းကလေးများတစ်ရှူးများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအပေါ်ဖြုန်းတီးရ။ ငါရဲရင့်ချစ်စရာကောင်း, တားမြစ်ခြင်းမရှိသောနှင့်လူမှုရေးအရအခမဲ့ဖြစ်ချင်တယ်။ ငါသည်လည်းငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်သီးသန့်ဖြစ်ချင်တယ်, ငါပိုကောင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ; porn အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုခစျြဖို့ဘယ်လိုငါ့ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ချွတ်လူရှုပ်, ဒါပေမယ့်မပေးဖို့ဘယ်လိုသင်ပေးတယ်။ ငါသည်ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် badassery, ရဲရင့်, Self-စိတ်ချပါ, ကြီးစွာသော, အစစ်အမှန်မိန်းမနှင့်အကြီးအလိင်သို့သည့်ခံရဖို့ချင်တယ်။
အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာ object တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ porn မှချွတ်လူရှုပ်တဲ့အခါမှာအချို့အပျြောအပါးစက်လျှင်အဖြစ်, ငါ့ကိုယ်ဆက်ဆံပါ။ အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာထက်အများကြီးပိုပါတယ်, ငါပျော်မွေ့ရန်နည်းလမ်းများထက် ပို. အဘယ်မျှမဟုတ်သကဲ့သို့ငါ၏ကိုယ်ပြုမူဆက်ဆံသောအခါငါသည်လူကိုသကဲ့သို့ငါ၏အလားအလာအထိအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါဘူး။ ငါသည်ငါ့လိင်တစ်ရှူးနှင့် pixels ကိုအပေါ်ဖြုန်းတီးမ, ငါကြိုက်နှစ်သက်သူငါ့ကိုဂရုစိုက်တဲ့သူတစ်ဦးမိန်းမနှင့်ဝေမျှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချင်တယ်။
porn အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစွန့်ပစ်သည်။ ဒါဟာလူတဦးသည်ငါ့ရန်အရှက်ကွဲပါပဲ။ ဒါဟာလူ့လိင်တစ်ဦးအရှက်ကွဲပါပဲ။ ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုအတွက်တို့၏အညစ်အကြေးချင်ကြပါဘူး။
porn ဒီအကြောင်းပြချက်မဆိုဂရုစိုက်ကြပါဘူးကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရစေသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှနေတဲ့ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းဖို့အရေးပါပါတယ်။ ဒါကတော့သောက်သုံးမကျမှုပဲ။ အဲဒါကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အားလုံးထိခိုက်မှုကိုဂရုမစိုဖို့ကျွန်မကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်တစ်ခုခုညစ်ဖြစ်ပါသည်, ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုထဲမှာချင်ကြပါဘူး။
LINK - အကြှနျုပျ၏ဆယ်ပါးအကြောင်းရင်းများ